Daabacaadda-Waqtiga-dhabta ah iyo Raadinta | Martech Zone
Khamiis, Maarso 4, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waqtiga dhabta ah… Waxay noqotay cunsur muhiim ah. Webtrends ayaa sii daayay raadinta waqtiga-dhabta ah oo ay weheliso digniino. PubSubhubbub ayaa u soo baxaysa baloogyada si ay u riixaan quudintooda halkii ay ka soo ceshan lahaayeen. Waqtiga falcelinta raadintu wuu sii yaraanayaa… dadku waxay filayaan jawaabo su'aalaha la weydiiyay daqiiqado yar uun ka hor.
Daabacayaasha, caqabada ayaa ah inay ka falceliyaan markay wararku dhacaan isla markaana ay uga faa'iideystaan ​​isla markiiba. Haddii aad ku jirtid warshadaha moobiilka oo wax cusubi dhacaan, waxaad u baahan tahay inaad sida ugu dhakhsaha badan u daabacdo. Maaha oo kaliya caan ka ahaanshaha waxa keenaya taraafikada, sidoo kale waa awoodaada inaad ka falceliso.
Dhowr maalmood ka hor, waxaan soo daabacay WordPress Plugin oo loogu talagalay ChaCha. Fidinta waa isku-darka tijaabinta walxaha qaarkood ee shabakadda ballaaran ee su'aalaha ChaCha - hadda waxaa laga helaa API, quudinta mawduucyada, iyo quudinta caadiga ah. Fidinta waxay leedahay dhowr wijad-geesood ah - midka runti u oggolaanaya in waqtiga dhabta ah su'aalaha la waydiiyo jawaabna loo helo…. quruxsan qabow
Milkiilayaasha baloogyada, waxaan sidoo kale ku soo daray dashboardka 'ChaCha Trends dashboard' kaas oo siiya dadka wax qora ee wax qora oo leh aragti guud oo ku saabsan isbeddellada xogta ee ku saabsan ChaCha, Twitter iyo Google! Markaad u kuurgasho macluumaadka soo socda, waxaad ka faa'iideysan kartaa taraafikada mowduucyada ay dadku weydiinayaan, raadinayaan, ama ka doodayaan.
Fadlan ii sheeg waxa aad u malaynayso! Kaliya tag galkaaga plugin, Ku dar Cusub, oo raadi ChaCha. Guji dhagsii oo waxay rakibi doontaa fiilada. Si aad u isticmaasho widget-yada dhinaceeda, iska diiwaangeli soo-geliyaha soo-geliyaha ee ka socda ChaCha waadna kici doontaa oo socotaa waqti yar! Haddii aad si fudud u rabto inaad maamusho shaashadda, wax uun ku qor meesha API Goob muhiim ah.
Waxaa jira xoogaa buuq ah oo ka imanaya dhaqanka pop-ka dhamaan ilaha oo dhan, laakiin waxaad kaheli doontaa jawharad marwalba mar ah si aad uga faa'iidaysato. Ka faa'iideysiga ereyada waqtiga-dhabta ah ee ku jira mawduucaaga isla markaana si dhakhso leh u daabacaadda waxay ku siin kartaa balooggaaga xoogaa taraafik ah oo lama filaan ah!
Daah-: ChaCha waa macmiil.
Maxay Tahay Sababta Aad Uga Bixi Lahayd Maanta